Alchema na-agbanwe mkpụrụ gị ka ọ bụrụ mmanya | Akụkọ akụrụngwa
Alchema na-agbanwe mkpụrụ gị ka ọ ghọọ mmanya
Joaquin Garcia | | Ngwa
O doro anya na ọtụtụ n'ime unu anwaala ịme biya ma ọ bụ mmanya site na ntuziaka N'onwe Gị nke dị na Internetntanetị, mana e nwere ụzọ ọzọ. Thatzọ na-agbanwe mkpụrụ osisi anyị nwere n'ụlọ maka mmanya site na Alchema.
Eziokwu bụ na ọ dị ezigbo mma na ngwa akpọrọ Alchema dị mma (opekata mpe karịa ịmị biya n'ime okpokoro ịwụ ahụ n'ụlọ) mana ọ nwere ọghọm ya nke ga - eme Alchema ọ bụghị ngwaọrụ kachasị amasị ya na kichin n'ụlọ.
Alchema bụ ngwa na na-arụ ọrụ dị ka a kichin robot. Anyị ga-agbaso usoro nhazi nke gụnyere robot ma gbanye ngwaọrụ ahụ. Mgbe nke a gasị, Alchema na-ahụ maka ịme ihe ndị ọzọ. Ihe niile gbasara nkwụnye ego ị nwere ebe anyị debere ihe ndị ahụ. Usoro a agaghị adịgide oge dị ka oven anyị si arụ, mana kama anyị ga-echere ọtụtụ ụbọchị na ọbụna izu iji nweta nsonaazụ, nke pụtara na ndị na-a outụbiga mmanya ókè ga-aga n'ihu na ụlọ ahịa ịzụta maka Alchema anaghị edozi nsogbu a. N'akụkụ aka nke ọzọ, Alchema dakọtara na iOS. Ọ nwere ngwa nke na-enye anyị ohere ịchịkwa usoro mmanya na-aba n'anya site na iPhone anyị n'oge niile.
Alchema nwere ike ijikwa iPhone anyị
Ugbu a anyị nwere ike nweta Alchema site na Kickstarter, ikpo okwu igwe mmadụ ama ama. Ikpokoro a na-enye anyị ohere iru otu Alchema maka $ 359. Ee, ngwaọrụ a na-achọ ego iji nwee ike ree, ihe na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ngwaọrụ ahụ, mana ọ gaghị abụ ngwaọrụ izizi nke ọha na eze nwere ekele na nke na-enweghị ego a ga-etinye maka ire ere .
Echere m n'onwe m na ihe a na-adọrọ mmasị ma ka nwere nsogbu ihe ikeỌfọn, ọ bụrụ na mmanya ahụ akpụ n'ezie, ọ ga-abụ ahụike anyị ga-ata ahụhụ. N'ọnọdụ ọ bụla ọ bụ ihe enwere ike ịme ya na ụfọdụ mmelite na mgbanwe nwere ike ịbụ n'oge ire Alchema.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Alchema na-agbanwe mkpụrụ gị ka ọ ghọọ mmanya
A na-akwụsị OnePlus 3 ka a ree ya na Europe, ọbụlagodi ọnwa nke ọnwa Septemba
Nvidia Titan X, dị ugbu a na Spain maka euro 1.310